Ikhaya le-Toby - I-Airbnb
Quindalup, Western Australia, i-Australia
Indlu encane ibungazwe ngu-Simon
Ikhaya le-North elibheke i-Luxury container emabhishi e-Toby inlet. Imizuzu engu-3 ukusuka enkabeni ye-Dunsborough ngemoto imizuzu engu-10 yokuhamba ngezinyawo ukuya e-Palmers wery & i-paddle yesikebhe emfushane ngaphesheya kwendlu eya ebhishi. Ihlonyiswe ngokugcwele nge-bbq, umuntu ongu-4 oshisayo we-spa & umpheme omuhle ongahlala kuwo ukuze ubuke ama-sunsets amangalisayo.
Ilungele abantu abashadile njengokuvakasha kwezithandani Ayikhuthazwa futhi ngeke yamukele ukubhukha kwezingane ngenxa yokusondelana nendawo engenayo. Kunekamelo lokulala elilodwa elinombhede omkhulu nombhede omkhulu wosuku olulodwa, ukufinyelela ekamelweni lokulala kuvulekile ukusuka endaweni yokuphumula eyinhloko. Indawo ethokomele kakhulu yabantu ababili,ingakwazi ukuhlalisa abantu abathathu, abane ngesikebhe nomuntu olala kusofa.
Kukhona indawo enhle yokumisa itende eceleni kwendlu eyakhiwe ngamapulangwe. Itende & omatilasi banganikezwa ukuze kuhlaliswe izivakashi ezengeziwe. Izindleko ezengeziwe zizosebenza.
Umbhede omkhulu ongu-1, Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 1 usofa, imibhede yenetha engu-1
Indawo enhle, eduze kakhulu nezindawo ezenza iwayini, izindawo zokwenza utshwala & idolobha.
Sisemgwaqweni oyinhloko nakuba sibuyele emuva ngendlela efanele. Kodwa ungalindela umsindo othile womgwaqo. I-Tobyhome igcwale kakhulu & inamaqhwa amabili ngakho kuhle & kuthule ngaphakathi. Uma ungaphandle, indawo yompheme iseceleni kwendlu ngakho ivikelwe yikhaya ukusuka emgwaqweni.
Ukuxhumana kuzoba phansi ngaphandle uma izivakashi zicela.
Uma ngisekhaya futhi ngikubona ufika ngizovela ngizethule.
Hlola ezinye izinketho ezise- Quindalup namaphethelo